कस्तो तेल सेवन गर्ने? यस्तो छ चिकित्सकको सुझाब – Etajakhabar
कस्तो तेल सेवन गर्ने? यस्तो छ चिकित्सकको सुझाब
डा.अरुणा उप्रेती जनस्वाथ्यविज्ञ चिल्लो पदार्थ हाम्रो शरीरका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । हामीले खाने कतिपय भिटामिनहरू चिल्लो पदार्थमा मात्र घुल्ने भएका कारण पनि शरीरलाई यसको आवश्यकता पर्छ । परिकारमा प्रयोग गरिने तेल चिल्लो पदार्थ प्राप्त गर्ने प्रमुख स्रोत हो । तर, सही तेल, सही तरिकाले प्रयोग गरिएन भने विभिन्न रोग पनि निम्तिन सक्छ :
तेल खरिद गर्दा नै ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले तेल कहाँ र कहिले बनेको बुझ्नुपर्छ । उत्पादन मिति हेरेर मात्रै तेल प्रयोग गर्नुपर्छ । उपभोग मिति सकिएको तेल बिखबराबर हुन्छ ।
स्वदेश र विदेशमा बनेका सस्तोदेखि महँगो मूल्यसम्मका तेल बजारमा पाइन्छ । तेलमा मिसावट भएको नांगो आँखाले थाहा पाउन सकिँदैन । विज्ञापनका आधारमा पनि तेल राम्रो–नराम्रो छुट्याउनुहुँदैन । मिसावट भएको तेल चाँडै बिग्रिन्छ ।
दैनिक खानामा हामीलाई १० प्रतिशत चिल्लो पदार्थ आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिको तौल, उचाइ र श्रमअनुसार चिल्लो पदार्थ आवश्यक पर्छ ।
वनस्पति घिउ प्रयोग गरिएका खाद्य पदार्थहरू हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन् । तोरीको तेल प्रयोग गरिएकै राम्रो हुन्छ । मुटुरोगीहरूले तेल कम खानुपर्छ । यस्ता व्यक्तिलाई जैतुनको तेल उपयुक्त हुन्छ ।
धेरैपटक तेल तताएर प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । एकपटक तताएको तेललाई फेरि पटक–पटक तताएर प्रयोग गर्नुहुँदैन । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक १२, २०७४ समय: १०:१६:०५